शोभा सुनुवार Archives - Sunuwar.org
Posted by: uttam Kaatich | on September 13, 2021
–शोभा सुनुवार जुलियट
गुइँदा कोइँच समाजमा मानसिक उपचार पद्धति हो । विशेषगरी कुनै पनि छोरी मान्छे निरन्तर विरामी भयो भने विरामी बनाउने अनिष्ठकारी दुरात्मालाई छक्काउने एक किसिमको तान्त्रिक मानसिक उपाचार विधि हो । यस्ता विधिहरु कोइँच समुदायमा धेरै छन् । वास्तवमा संसारका जुनसुकै जातजातिमा यस्ता स्वास्थोपचारकै लागि विभिन्न संस्कार संस्कृतिको जन्म भएको पाइन्छ । कोइँच समुदायमा पनि यस्ता धेरै जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारदेखि जीवनशैली र परम्पराहरुमा विविधता छ । ती हरेक साँस्कारिक कार्यको अर्थ हुन्छ, विधि छ । त्यही परम्पराले नै दैनिक जीवन चलेको छ । अन्नबाली लगाउनेदेखि उठाउनेसम्म विभिन्न संस्कार छन् । हरेक महिना फरक फरक विधि र परम्पारिक संस्कार छन् । खाँदा, बस्दा, बिरामी पर्दा उपचार गर्ने समेत विभिन्न खाले संस्कार पद्दतिहरु छन । कोइँचमा पोइँब ग्याँमिबाट राम्रो नराम्रो काम गर्ने चलन छ ः बिरामी पर्दा दबाइमुलो गर्ने जडिबुटी उपचार, धेरै थलिएर बिरामी हुँदा बाँदो उठाउने, एक क्षणमा बिरामी भएमा रोल्चा, सुइच्चा परम्परा । यसैले कोइँच समुदायमा सर्वप्रथम नाडी विचार र लिँक्यु हेरेर विमारको पहिचान गर्ने र त्यसको उपाय खोज्ने गरिन्छ । यस्तै यस्तै उपचार मध्ये गुइँदा (कतै कतै गोइँदा पनि भनिन्छ।) पनि एक हो । जब सानो उमेरमा बच्चा बिरामी पर्छ जति उपचार गर्दा पनि निको नहुँदैन, जडिबुटी, झारफुक पनि लाग्दैन त्यतिबेला अब बाँच्दैन भन्ने लागेपछिको अन्तिम उपचारको उपाय भनेकै गुइँदा हो । खासमा गुइँदाको अर्थ ग्लुइँचा हो । कसै कसैले यसलाई गुइ बÞार्चा भन्ने पनि गर्दछन् । यसको खास अर्थ भनेको आफ्नु कुल परिवारबाट छुटाएर वा निकालेर अर्काको हातमा थमाउनु भन्ने बुझिन्छ । मानसिक रुपमा अब मेरो होइन । मलाई किन दुःख दिइरहन्छस् । ल मैले निकाली सकेँ । अर्काको हातमा सुम्पेँ । मेरो कुनै पनि ग्रहदशाले उसलाई अब असर गर्दैन भन्नको खातिर गुइँदा उपचार गर्ने चलन रहँदै आएको छ । खासमा यो नराम्रो ग्रह दशा फाल्ने उपाय हो । यो जो पायो त्यहि घरमा गरिँदैन । जसको घरमा कास गरेको छ, त्यो घरमा तारा लगा हुन्छ । तारा लागाभित्र गुइँदा राखिन्छ । जसको घरमा ख्येँगु मात्रै गरेको छ त्यस्तो घरमा कालपिपि लगामा गुइँदा राखिन्छ र जसको घरमा कास ख्येँगु नै गरिएको हुँदैन त्यस्तो घरमा भने बाहिर कतै कसैले नछुने गरि चोखो स्थान खोपा वा मारुमा गुइँदा राखिन्छ वा फालिन्छ । बिरामी बच्चालाई भाकेर, बिरामी निको होस भनेर पोइँब ग्याँमिले आफ्नो कुलदेउता जगाएर रातको समयमा गुइँदा फाल्ने गरिन्छ । यसरी यो विधि गरेपछि बच्चा निको भएर ठूलो भएपछि फेरि गुइँदा फिर्ता लिने गरिन्छ । कुनै पनि बच्चामा पोइँबो ग्याँमिको थुङ देखियो भने पनि गुइँदा फाल्ने गरिन्छ । गुइँदाबाट फिर्ता नगरेमा बिहेबारी भएपछि जायजन्म हुँदैन भन्ने जनविश्वास छ । त्यसैले यसरी गुइँदा हालेको मान्छेलाई विहे गर्नुपूर्व नै गुइँदा फर्काउने गरिन्छ । गुइँदा फर्काएपछि जायजन्म हुने बिश्वास रहेको छ । यसरी गुइँदा निकाल्दा जुन पोइँबो ग्याँमिले गुइँदामा हुलेको छ उसैले निकाल्नुपर्दछ । यदि पोइँबो ग्याँमि मरिहाल्यो भने उसकै चेलाले त्यो गुइँदा फर्काउने जिम्मा हुन आउँछ । गुइँदा फर्काउँदा गुइँदा राखे जसरी नै रातमा चिन्ता बसेर विशेष विधिविधान पुरा गर्नु पर्दछ । जहाँ गुइँदा हुलिएको छ त्यस स्थानलाई छोप्न सेतो कपडा चाहिन्छ अनि एक पाथी वा बोतल रक्सी, भेटी अनि फेटा चाहिन्छ । त्यो गुइँदा ढाकेको सेतो कपडा झिकेर घरमा ठूलो मुलि बागे, बागे नभए आमालाई आमा पनि नभए पोइँब ग्याँमिलाई फेटा बाँधी दिनुपर्दछ । गुइँदामा महिलाको भुमिका अहम् रहेको हुन्छ । कुनै पनि जिनिएको कुनै रोग हो भनेर पत्त नलागेको अति नराम्रो बिमारलाई सदा सदाको लागि विदा गर्ने वा रोगोपचार गर्ने कोइँच समुदायको उपचार पद्धति अहिले विरलै प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।
स्रोत : उत्तमकुमार सुनुवार, काःत, चुप्लु । पोइब प्रेमबहादुर सुनुवार लामागाउँ साब्ला । यामबहादुर सुनुवार वाइबि दार्खा राष्नाइलु ।
Posted by: uttam Kaatich | on May 20, 2020
कोरोनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ : अन्धविश्वासको ऐजुरु खुर्केर फाल्ने अवसर
– शोभा जुलियट
समाजमा यस्ता रितिरिवाज छन जुन मनुस्मृतिका नियमले बाँधिएर यसरी नमासिने गरी कुरीतिको जरा गाडिएको छ । यही कारण समाज अझै पुरातानवादी सोँचबाट माथि उठ्न सकेको छैन । परिवर्तनका धेरै आन्दोलन भए तर समातामूलक समावेशी समाजको असली ढोका खोल्न नसकेको अबस्था छ । तर यस विषम परिस्थितिमा कोरोना देसानले निरास मात्रै होइन समाज परिवर्तनका नयाँ आशाहरु पनि धेरै जन्माएको छ । समतामूलक समावेशी असली नेपाली समाज निर्माण गर्ने सम्भावनाका ढोका पनि खुल्दै छ । सबैले यही आधारशिविरबाट नयाँ वहसको शुरुआत गर्न जरुरी छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा पस्चिमी मुलुकका केही हावाले गर्दा धेरथोर केही कुराहरु परिवर्तन भए । परिवर्तन त भयो मात्रै मान्छेको खानपान र लाउने संस्कृति । केही हदसम्म मान्छेको दैनिक जीवनशैलीमा फडको मारेको छ । तर परिवर्तन हुनुपर्ने मुख्य संस्कार संस्कृतिमा परिवर्तन हुनसकीरहेको छैन । आत्याधुनिक प्रविधिले मान्छेलाई सन्सार हातमा नै राखी दिएको छ र जीवन जिउन, सन्सार बुझ्न निकै सहज बनाएको छ । तर पनि दुःखको कुरा समाजमा चलीआएको कुरीतिहरु अझै जिउँका तिउँ जीवित छन । समयको फड्को एक्काइसौं शताब्दीमा फाल हान्दै छ तर नेपालीको साँघुरो सोंचमा कहिल्यै फराकिलो बन्न सकेन । अझै पनि अन्धविश्वासले नराम्ररी जगडीरहेको छ जुन लैङ्गिक बिभेदको सिकार भएर नेपाली नारीहरु बाँचीरहनु परेको छ ।
समाज परिवर्तन गर्ने ठेक्का लिएका मान्छे, सामाजिक हुन सिकाउने मान्छे पनि लैङ्गिक विभेदको पक्षपोषणमा उभिएको देखिन्छ । समाज र समुदायका अगुवा र राजनीतिक व्यक्तिबाट नै देशको विकास हुने हो । देश विकास गर्नमा महत्वपूर्ण भुमिका उनीहरुले नै खेल्ने गर्दछन् । नरनारी बराबरी, नारी पुरुष रथका दुई पाङ्ग्रा त भन्ने गरिन्छ तर व्यबहारमा उतार्न भने त्यति सजिलो छैन । जुन सदियौंदेखि एकल सनातन हिन्दू धार्मिक मुल्यमान्यताले होस् या पुरुषवादी चिन्तनले नेपाली समाजलाई पछाडि धकेलीरहेको छ ।
छोरा नभए अगती हुने भन्ने मान्यताले जबसम्म हामीहरुमा पिरोलीरन्छ समाजले विकासको निकास पाउँदैन । जसको छोरा छ त्यसले मात्र मरेपछि गति पाउछ, छोराले दागबत्ती दिन्छ, लास काँधमा हाल्छ, क्रिया बस्छ भन्ने मान्यता हामी माझमा जती गाढा बनार रहन्छ हाम्रो प्रगति उन्नतिको गती कम्तीमा पनि अझै आधा शताब्दि पछाडि धकेलिएर जान्छ ।
अचम्म लाग्छ । संसारभरि नै मान्छेको जन्म हुनमा नारी पुरुषको उत्तिकै भुमिका रहेन्छ । हाम्रो नेपाली समाजमा भने छोराले मात्रै सबै काम गर्न सक्छ र छोराले गरेको काम वैधानिक ठान्छ । जुन अन्धविश्वासले मरेपछि पितृ पार तार्न समेत छोरा नै चाहिन्छ भन्ने हिन्दू परम्परा र मान्यताको जगमा नेपालको कानुन बन्छ भने कसरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछाडिएको वर्गहरुले संविधानतः प्रदत्त समानताको हकको पुरापुरी उपयोग गर्न सक्छ ? महाअन्धबिस्वाशमा गुजिल्टिएको छ हाम्रो समाज । हामी त्यसैका अंग हौं ।
सृष्टि चलायमन राख्नको लागि नारी पुरुष अर्थात् भालेपोथीको मिलन हुन जरुरी छ । प्रकृतिले कतै पनि नारीपुरुषको भेदभाव गरेको छैन । ग¥यो त केवल संरचनामा ग¥यो । त्यो स्वभाविक थियो र हो । तर यहाँनेर बिबादास्पद तथा विभेदीत कुरा के हो भने पुरुष विना सन्सार नै रहँदैन भनिन्छ । पुरुषलाई पनि त त्यही महिलााले जन्माएको हो भन्ने कुरा भुसुक्कै विर्सिदिने समाज छ । हो साच्चिकै छोराले मात्र सन्सार धान्ने भए सायद यो सृष्टिको नियम नै अर्कै हुन्थ्यो होला । तै पनि समाजमा जे जस्तो रित व्याप्त भएपनि नारी सृष्टि हो । प्रकृति हो । शक्तिकेन्द्र हो । रचनागर्भ हो । जहाँ प्रकृतिको नियम भङ्ग हुन्छ, त्यहाँ सृष्टिले विनासको रुप लिन्छ । आखिर प्रकृतिको अगाडि सबैले हार खानैपर्छ । प्रकृतिले सिर्जीत सिर्जनाको अगाडि सबै लाचार हुनैपर्छ । जसले जेसुकै रितिथिती रखोस् । बचाउको लागि जे जस्तो नियम बनाओस् प्रकृतिको अगाडि सबैले घुँडा टेक्नैपर्छ भन्ने गतिलो शिक्षा दिएको छ अहिलेको यो कोरोना भाइरस महामारीले ।
अब नेपाली समाजले आँखा खोल्नु जरुरी छ । अझै पनि समतामुलक समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा त्यस्ता कुप्रथको पुच्छार समातेर वैतरणी तर्नु जरुरी छैन । समाजमा बसेपछि सामाजिक मुल्य मान्यताहरु हुन्छन् तर कुप्रथाहरुलाई अँगालो हालेर बस्नुको अर्थ रहँदैन र यो प्रगति उन्नतिको वाधक हो । छोराले दागवत्ती दिएपछि सरासर स्वर्गमा गइँन्छ भन्ने संकीर्ण विचारको अन्त्य आवश्यक छ । जबसम्म जनजनमा व्यप्त रहन्छ यस्तो लैंङ्गिक विभेदपूर्ण विचार रहीरहन्छ । देशको विकास हुँदै हुँदैन । र, अब यो संकीर्ण विचारलाई चिर्ने गतिलो बाटो कोरोना भाइरसको महामारीले खनेको छ । जुन धुलिखेल अस्पताल ल्याउँदा ल्याउँदै मृत्युशैयामा विराजमानी सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे राम्चेको सुत्केरी युवतीलाई कसैले शव बोक्न नमानेपछि अन्तिम दाहसंस्कारको लागि भक्तपुर अस्पतालमा टेन्ट टाँगेर बसेको स्काउटका रेस्क्यु टोलीले शव बोकेर पहुपति आर्यघाट ल्याएर विद्युतशवदहमा दागबत्ती दिएर अन्तिम सस्कार गरे । यत्ति नै काफी छ कि छोराले दागवत्ती दिँदा सरासर स्वर्ग जाने मुमान्यतालाई नजीकबाट सजिलै बुझिने उदाहरण । स्वभाविक अवस्थाको लागि आफ्नो पुरुषत्व देखाउन समाजमा बनाएको मान्यता कोरोना भाइरस महामारीमा गल्र्याम ग्युर्लुम्म भत्किएको छ ।
न आफ्नो श्रीमानले शव छुन पाए । न आफन्तले हेर्नसम्म मौका पाए । अनि अब यस्तो परिस्थितिमा कस्तो धर्म ? कस्तो नियम ? कस्तो संस्कारलाई उत्कृष्ट मान्ने ? आखिर एउटा अन्धबिह्वासको पर्दा ताँगेर महिला हिंसामा रमाउने समाजले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने यो सुनौलो मौका हो । सृष्टिभन्दा ठूलो केही हँुदैन र मृत्युभन्दा डरलाग्दो अवस्था अर्को हुँदैन । आपूm माथि पर्न जस्तो नियम बनाए पनि आखिर प्रकृतिसँग सबैले झुक्नै पर्छ । आफंैले बनाएको नियमले अरुलाइ दुःख दिने र घमन्ड देखाउनु हुदैन । समाज अब सुध्रिनुपर्छ । हरेक महामारीले एउटा नयाँ परिवर्तन र नयाँ सम्भावना बोकेर आउँछ नै । यो कोरोना महामारीले पनि अन्धविश्वासको ओतमा पलाएका ऐजुरुहरुलाई खुर्केर फाल्ने बलियो अवसर आएको छ । रुढीबादीको आडमा आफुलाई सर्वोत्तम दावी गर्ने हुतिहाराहरुलाई गतिलो थप्पड लगाएको छ । । अब यो विषम परिस्थितिले सिकाएको पाठबाट विभेदको पसल थापेर सम्पन्न बन्छु भन्ने समाजका ठेकेदारहरु र राजनीतिकर्मीहरुको गिदीमा मतामूलाक समावेशी समाज निर्माणको लागि सकारात्मक साँेच भरी दिन्छ कि ! कोरोना कहरले समाज र राजनीतिलाई गतिलो पाठ सिकाएको छ समादेशी समानुपातिक समाज निर्माणको आधार भनेका आम जनताहरुको चाहन हुन्न पन्ने । तर समाजले ती राम्रा कुराहरु सिक्छन् कि सिक्दैनन् ? न अब त बुद्धिको विर्को खुल्छ कि ?
–लिखुतामाकोशी १, कुपिन्ड, साब्ला, रामेछाप
हाल : बौद्ध, कामनपा ६, सिमलटार ।